NdakavaSVIRA vese Masisters vari 2 all night LONG – VanodaZvinhu
Sister yacho Nyasha anga asina kana nyadzi, ipapo pamberi pedu akabvisa hembe dzose nepanty ndokupinda mumablankets asina chinhu hake. Tariro akangoseka ndokusiya zvakadaro.
Ndiri pakati kudaro BP yangu zvese neNyongo meter were very high above the roof. Nyasha aive nemazizamhu nemagaro ekuti nekutarisa chete waitunda!
Mublanket imomo Nyasha ndiye akatanga ndokundigumha achinditekenyedza. Ndakatanga kuseka ndichibuda mumagumbeze apa mboro yakamira ichibuda nepamabuttons eBoxer Short. Tariro akaseka ndokubvunza “Chamisa mboro iyo ndini here or ndiNyasha nemazigaro ake?” Vese vakaseka pandakapindura ndichiti MESE!
Tariro akabva ati “saka uchagona here kusvira tese?” Ndakapererwa ndikaita 5 seconds dzekufunga ndokuti “ndinofa ndichiedza!”
Ndakaenda pabed paye ndokutanga kubata mazamhu aNyasha ndichamadya. Ndakachinja ndikaenda kunaTariro same treatment. Ndakapedza kudaro ndakarara ndakatarisa mudenga ndokuti, “anoda ngaayigarire mboro iyi” Nyasha akabva asimuka ndokuigarira, ndakaona mboro yangu ichidisappear kupinda mukati make mazigaro ake akaita zvekuimedza.
Takasvirana takadaro ini ndichikisser Tariro iye achitambisa mazamhu aNyasha.
by DrSviro · Published December 7, 2015
Next story Ndakaribhilivhisa ndokurisvira zvemhando Zibabe Musoja